Shufto badeeda Soomaalida oo siidayey markab ay haysteen shan bilood – SBC
Shufto badeeda Soomaalida oo siidayey markab ay haysteen shan bilood
Kooxaha burcad badeeda Soomaalida ayaa siidaayey 21 shaqaale ah oo u dhashay dalka Hindiya iyo markab ay ku haysteen mudo ka badan shan bilood, sida ay shaaciyeen masuuliyiin ka tirsan dawlada Hindiya.
Markabka la siidaayey oo lagu magacaabo MV Fairchem Bogey wuxuu ahaa maraakiibta xambaara kiimiada iyadoo aan la sheegin qaabka lagu siidaayey, balse ay u badan tahay in lacag madaxfurasho ah la siiyey shufto badeeda Soomaalida, oo aalaba u afduubka maraakiibta inay ka helaan madaxfurasho.
“Dhamana shaqaalaha 21-ka & markabka ay saarnaayeen oo bad qaba ayaa la siidaayey, waxaana uu ku sii jeeda dekad amaan” sidaasi waxaa yiri S.B. Agnihotri oo ah agaasimaha wakaalada maraakiibta Hindiya oo saxafiyiinta kula hadley magaalada Mumbai.
Markabkan ayaa la siidaayey shaley galinkii dambe iyadoo siideyntiisu ay sidoo kale ku soo aadayso iyadoo la siidaayey markab laga leeyahay Talyaaniga bishii hore kaasi oo ay haysteen burcad badeedu 10-kii bilood ee la soo dhaafay, waxaana saarnaa 22 shaqaale Hindi ah.